Sensitization घटना जीव, चिकित्सा, मनोविज्ञान, रसायन र भौतिक, साथै विज्ञान को धेरै अन्य क्षेत्रहरु अवलोकन। यस मामला मा, शब्द धेरै फरक कुरा बुझाउँछ। तपाईं अर्थ के थियो?
जीव र चिकित्सा
सामान्यतया, यो अवधि allergists प्रयोग गरिन्छ। यस क्षेत्रमा, sensitization - कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक stimuli गर्न शरीर गरेको संवेदनशीलता बढ्दै छ। यो निश्चित पदार्थ संग सम्पर्क प्रतिक्रिया एलर्जी प्रतिक्रिया को पहिलो चरणको छ। यस मामला मा, शरीर विशिष्ट एंटीबडी, वृद्धि लसीका नोड्स, lymphocytes संख्या, साथै स्नायु प्रणाली मा अवलोकन परिवर्तनहरू उत्पादन गर्छ। यसरी, sensitization - छ, वास्तवमा, एक एलर्जी प्रतिक्रिया को गठन। को क्रोध उत्पन्न संग अर्को समय सम्पर्क पहिले नै पूर्ण-fledged समस्या परिणत गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ आरएच sensitization रूपमा यस्तो कुरा हो। यो नै घटना, तर विशिष्ट प्रकृति छ। किनकी यो संग गर्भवती महिला भेट हुन सक्छ आरएच-नकारात्मक। यस मामला मा भ्रूण रगत क्रोध उत्पन्न प्रोटीन protrude।
साथै, "मिलाइएको" को अवधारणा सहित यो अवधि पनि सचेत विवरण प्रयोग गरिएको छ। रिसेप्टर्स आफ्नो संवेदनशीलता विकास, तालिम गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, स्वाद र गन्ध विकास tasters perfumers संलग्न छन्। तपाईं पनि केही stimuli गर्न यसको समग्र susceptibility वा प्रतिक्रिया हुर्काउन, दर्शनले वा सुनेर तालिम गर्न सक्नुहुन्छ। रिसेप्टर्स काम छैन केही कारण एक प्रकार को लागि क्षतिपूर्ति संयन्त्र समावेश भने, अन्य अङ्गहरू गर्न संवेदनशीलता वृद्धि। यसरी, sensitization - एक संयन्त्र कि शरीर, नयाँ अवस्था भिज्न साथै बलियो उत्तेजना उपस्थिति संकेत दिन्छ।
मात्र गर्न जीवशास्त्रीहरूको र डाक्टर यो अवधि प्रयोग गर्नुहोस्। मनोवैज्ञानिक पनि तिनीहरूलाई नै प्रकार को घटना बुझ्न, आफ्नो काम मा यो अवधारणा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर अर्को स्तर मा। सामान्यतया, यो अझै पनि desensitization को एउटा प्रश्न, stimuli प्रतिक्रिया फिक्री प्रतिक्रिया mitigating अर्थात् छ। मुख्यतया, को सन्दर्भ मा प्रयोग अवधि phobias छुटकारा रही।
आवेदन अर्को क्षेत्र - विभिन्न पदार्थ आशक्त। यस सन्दर्भमा, sensitization - पहिलो को दोहोर्याइएको खुराक प्रतिक्रिया मा जीव बढि हिंसात्मक प्रतिक्रिया। यहाँ मनोविज्ञान पहिले नै राम्ररी तन्त्रिका विज्ञान द्वारा, किनभने, अनुसन्धान अनुसार, यो घटना हुन्छ कारण तथाकथित खुशी केन्द्र परिवर्तनको सीमा छ। यसलाई व्यापक नै प्रभाव प्राप्त गर्न सबै उच्च खुराक आवश्यक रूपमा लत को अवधारणा ज्ञात छ। यस सन्दर्भमा, उहाँलाई विपरीत बस sensitization छ।
अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रहरू शब्द प्रयोग को उदाहरण
यो अवधारणा पनि photochemistry मा, उदाहरणका लागि भौतिक प्रयोग र, छ। पहिलो मामला मा, एक sensitization अर्को एक अणु ऊर्जा को स्थानान्तरण बुझाउँछ। को फोटो सामाग्री को संवेदनशीलता वृद्धि र पनि बारेमा दोस्रो कुरा मा प्रतिक्रिया मात्र एक निश्चित तरङलम्बाइ को प्रकाश मा हासिल छ जो को माध्यम द्वारा स्पेक्ट्रल sensitization निकाल्छ।
के तपाईं एउटा आँखा डाक्टर भन्छौ? आफ्नो काम के हो?
टायर देखि अविश्वसनीय शिल्प
दबाइ 'क्लाफोरान'। प्रयोगको लागि निर्देशन
रिब भंग: लक्षण र उपचार
लसुन लागि नुस्खा।
Foxtrot - एक रोचक इतिहास संग एक नृत्य र कार्यान्वयन को कुनै कम रोचक प्रविधी
Anthurium: पातहरु पहेंलो बारी, तर गिर थिएन। फूल कसरी मदत गर्न।
मानकीकरण - एक आवश्यक प्राविधिक विनियमन तत्व
Satires - यो के हो? संक्षिप्त इतिहास र शैली को सुविधाहरू